Bankiga Adduunka oo 9 Milyan oo doolar ku maalgalinaya kaabayaasha dhaqaalaha Garoowe iyo magaalooyinka kalle ee Koonfurta Soomaaliya – Radio Daljir
Bankiga Adduunka oo 9 Milyan oo doolar ku maalgalinaya kaabayaasha dhaqaalaha Garoowe iyo magaalooyinka kalle ee Koonfurta Soomaaliya
Seteembar 8, 2018 7:28 b 0
Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Bankiga Adduunka ayaa daah furay mashruuc lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqalaaha ee Soomaaliya oo ay ku kacayso 9 milyan oo doolar, taasi oo uu tilmaamay inay tahay tijaabadii ugu horaysay ee maalgalineed ee kaabayaasha dhaqaalaha oo Bankigu bixiyo.
“Kaalinta Bankiga Adduunka ee Soomaaliya waxaa ka shaqaynta dhismaha iyo awoodda dowladnimo, si loo fidiyo horumarka iyo isbadalka” ayuu yiri Wakiilka Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Hugh Ridell.
“Mashruuca SURP waxaa uu noo ogolaanayaa inaan bilowno ka shaqaynta magaalooyinka iyo baahinta mashaariicda dalka oo dhan” ayuu yiri Ridell.
Mashruuca lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaahe e lagu taagerayo dowladaha hoose ayaa wajigiisa hore laga fulin doonaa Garoowe iyo Muqdisho, waxaana sidoo kalle lagu sii baahin doonaan Kismaayo iyo Baydhabo, waxaana magaalooyinkan loo xushay inay yihiin kuwa ugu badan ee barakacyaasha ay kusoo laabanayaan.
Hadalka Bankiga Adduunka ayaa kusoo beegamaya iyadoo dowladda Jarmalka ay sheegtay lacag dhan 23.4 milyan oo doolar inay ugu deeqayaan mashaariicda Jarmalka ee Soomaaliya.
Madaxwaynayaasha dowlad goboleedyada oo hakiyay wada shaqayntii dowladda dhexe (Akhriso)
Markab xeebaha gobolka Mudug kusoo caariyay oo lagu dul dagaalamayo